Zim ratifies African charter on democracy - NewsHawks
Veritas, a lawyer body with an interest in legal, constitutional and parliamentary affairs, says although Mnangagwa signed the charter on 21 March 2018 at an African Union (AU) summit, his signature alone was not sufficient to make Zimbabwe a “state party” and as such legally bound by the charter’s provisions.
“The charter’s definition of ‘state party’ and its article 47 requires the President’s signature on behalf of Zimbabwe to be supplemented by ratification in accordance with Zimbabwe’s constitutional procedures and the deposit of Zimbabwe’s instrument of ratification with the chairperson of the AU Commission,” Veritas said.
“On the deposit of the Instrument of Ratification — and only then — will Zimbabwe become a full state party to the charter.”
The ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs is expected to engage the ministry of Foreign Affairs and International Trade to have the instrument of ratification of the charter deposited with the chairperson of the AU Commission in Addis Ababa by Zimbabwe’s ambassador to the AU.
Zimbabwe is also expected to encourage effective coordination and harmonisation of governance policies among state parties, with the aim of promoting regional and continental integration; promoting state parties’ sustainable development and human security and promote the fight against corruption in conformity with the provisions of the AU Convention on Preventing and Combating Corruption adopted in Maputo, Mozambique, in July 2003.
The charter calls on members to promote best practice in the management of elections for purposes of political stability and good governance, among other outcomes. — STAFF WRITER.